Burmese Army – democracy for burma
!!!ေ#ဖ်ာပြီ #မေး။ ။ #အမည်၊အသက်၊ရွာအမည်ကို ပြောပေးပါ။..
On April 30, 2015 By Burma Myanmar newsIn ARAKAN VILLAGERS, Burma, BURMESE ARMY, MYANMARLeaveacomment
မေး။ ။ အမည်၊အသက်၊ရွာအမည်ကို ပြောပေးပါ။
ဖြေ။ ။ဦးသန်းစိန်၊၄၂နှစ်၊ဝဲကြီးထောင့်ရွာ ကျောက်တော်မြို့နယ်ပါ။
ဖြေ။ ။ဧပြီ၊၂၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီ လောက်မှာ ဖမ်းတာပါ။
မေး။ ။ဖမ်းပြီးတော့ ဘယ်ကိုခေါ်သွားပါလဲ။
ဖြေ။ ။ဝဲကြီးထောင့် စာသင်ကျောင်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။
မေး။ ။တခြား အဖမ်းခံထားရတဲ့ လူရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။မရှိသေးပါ။ညနေ လောက်မှ လင့်ဇင်သစ်ကျေးရွာမှ ဦးအောင်သန်းစိန်ကို ဖမ်းခေါ်လာတော့ ၂ယောက်တည်းပါ။
ဖြေ။ ။AA နဲ့ပတ်သက် မှုရှိလားမေးပါတယ်။
မေး။ ။ဘယ်နေရာကိုများ ခေါ်သွားတာရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ တပ်မကိုခေါ်သွားပါတယ်။
မေး။ ။ဟိုရောက်တော့ ဘာတွေ မေးသေးလဲ။
ဖြေ။ ။AA နဲ့ ပတ်သက်မှု ရှိမရှိမေးပါတယ်။
မေး။ ။လက်ကဒဏ်ရာတွေက ဘယ်လိုရတာပါလဲ။
မေး။ ။ ဘယ်လိုရှို့ခံရတာများပါလဲ။
ဖြေ။ ။ မမြင်လိုက်ပါဘူး။
မေး။ ။ကိုယ့်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်မီးရှို့တာကို မမြင်တာက ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။မျက်နှာကို လုံချည်နဲ့ အချုပ်ခံထားရလို့ပါ။
မေး။ ။ရိုက်နှက်တာမျိုးရော ရှိပါသေးလား။
ဖြေ။ ။ရှိပါတယ်။နည်းနည်းလောက်နားခိုင်းပြီး ထပ်ရိုက်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လက်နှစ်ဘက်ကလွဲရင် ခုတော့
မေး။ ။ အရိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေက။
ဖြေ။ ။ ရင်ဘတ်၊ကျော၊ခြေ၊လက် ပါ။ Continue reading “!!!ေ#ဖ်ာပြီ #မေး။ ။ #အမည်၊အသက်၊ရွာအမည်ကို ပြောပေးပါ။..” →
#Ta’ang National Liberation Army (TNLA) #fought #against #Burma #Army for #two #days #STATEMENT #TWO
On February 5, 2015 February 5, 2015 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Update on Situation in Ta’ang Region
As Tatmadaw (Myanmar Army) suffered heavy casualty,3jet fighters came in as reinforcement to support the offensive.
Battles taking place near Mogoke Town and Pateela village started at 0945 hours, and went on well after dusk. As Myanmar side suffered heavy casualty,3helicopter gunships came in at about 1800 hours, asareinforcement. At the same time3jet fighters came in and parked on the
airstrip at Momeik to assist.
Moreover, troops from units based at Mogoke, Momeik and the foothill of Mandalay Hill came to assist in the battles.
3rd February, Breaking News
A battle took place near Pantila village in Migoke Township, Ta’ang Region between the TNLA and Myanmar Army troops, starting from 0945 hours until the time of this report.
Update: Myanmar aircraft attacked also on Hsainglein and Shwe Nyaungbin villages.
Reinforcements of over 300 Myanmar troops from Momeik-Molon side and over 300 from Momeik- Khunka side marched towards the area whereabattle was taking place.
Troops from Battalion-717, under TNLA Brigade-2, and Myanmar troops from IB-223 clashed near Shwe Nyaungbin and Shwe Thaya villages in Momeik Township, from 0840 hours to
In the clash, not less than9Myanmar troops were killed and one killed on the TNLA side.
More fierce battles between TNLA and Myanmar troops – A battle took place on Namtsan-Panlon highway between troops from Battalion-773, under TNLA Brigade-3, and Myanmar troops fromDivision77.Two were killed on Myanmar side and no casualty
on TNLA side.
1) Ta’ang National Liberation Army (TNLA) fought against Burma Army for two days while TNLA was on an opium-eradication mission on the border between Mogoke and Mongmit townships on Feb2and Feb 3, 2015.Because of the clash2students and3villagers were seriously wounded, and more than 2000 from five Ta’ang villages, and other Lishaw and Chinese villages fled to the mountainous areas near the towns.
2) Because of that fighting, some ethnic villages near the battle have been totally abandoned and the schools in them are now closed. So the government must try to ensure that these schools are reopened because justafew days are left for students to study and sit the final exam and the ongoing fighting will be threatening their education. Given that, the government must stop the offensive targeting civilians and take responsibility for the2wounded students.
3) More than 1000 government soldiers from bases in Mogoke and Mongmit and Mandalay Hill, as well as2gunships and 1 fighter jets are now used in the offensive and there have been heavy causalities on both sides.
4) We denounce the brutal and indiscriminate use of force by Burma Army because it violates the Geneva Conventions that prohibit against utilizing armed helicopters, heavy weapons such as artillery, and excessive manpower and firepower.
5) Such kind of using excessive force is all the more inappropriate in the current situation , when President Thein Sein has publicly shown willingness to sign the nationwide ceasefire agreement on Feb 12 , 2015. So we, Ta’ang Women Organization and Ta’and Student and Youth Union, condemn the use of heavy military power such as armed helicopters during large-scale offensives that prevent the signing of ceasefire agreement and peace process.
6) So we demand the following
• The government stop immediately and absolutely the full-scale offensive
• The government stops immediately and absolutely the use of fighter jets, gunships, and rockets during civil war with ethnic groups.
• The government cooperates with the public in eradication of opium and other narcotics
asanational priority
• The government take responsibility of the welfare, education and resettlement of the war refugees
Ta’ang Women Organization – TWO
Ta’ang Students and Youth Union-TSYU
1. DD Poe Kyein (TWO) 09-6718218
2. Lway Poe Kyein Kee (TWO) 09-252325799
TWO & TSYU’s Joint Statement on Stop the brutal offensive in English
On October 30, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဂျပန်ရှိတိုကျို မြန်မာသံရုံးမှာ ဆန္ဒပြတာ ဂျပန်သတင်းစာထဲပါလာပြီ
3:00 p.m. on October 30.
The journalist Mr.Pargyi murder in front of the Myanmar embassy in Tokyo Kita-shinagawa in Japan.
About 100 NLD Japan branch members participated.
It is required ” Myanmar government needs to do the inquiries into the truth of journalist Mr.Par Gyi murder”, and “Myanmar government return journalist r.Pargyi’s dead body toafamily’s soon.”
A choral yelling is Mr. Wu Tong Nyein ofaNLD Japan branch member.
He cried for voice to the limitation, shedding tears.
30.10.2014 CR. TUN WAI
On September 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
On September 12, 2013 September 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကအိုင်အေ လိုင်ဇာ ဌာနချုပ်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက် တပ်မ (၄)မနဲ့စကခ (၃)ခုတို့ ကို ပူးတွဲတာဝန်ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ တပ်မ (၈၈) နဲ့ တပ်မ (၃၃) စတဲ့တပ်မတွေကို ထုတ်သုံးသွားမယ့်အပြင် မြေပြင်ပစ် ဒုံးတပ်နှင့် သံချပ်ကာတပ်မများကိုလည်း ၂၄ နာရီအတွင်း တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားရန် ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီလိုထိုးစစ်ဆင်မယ့် အစီအစဉ်အပေါ်မှာလဲ ပြည်သူတွေ က ထောက်ခံမှုတွေ ဟာ ယခင်ကထက် ရာခိုင်နှုန်းမြင့်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Battles spread to KIA’s 3rd Brigade area-တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ အတန်ကြာရပ်တန့် နေခဲ့သော ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၃) လက်အောက် တပ်ရင်း(၁၂) နယ်မြေများ တွင် မြန်မာအစိုးရတပ် ခမရ(၅၀ရ) တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ နှင့် ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ များ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေ
On September 11, 2013 September 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများ အတန်ကြာရပ်တန့် နေခဲ့သော ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၃) လက်အောက် တပ်ရင်း(၁၂) နယ်မြေများ တွင် မြန်မာအစိုးရတပ် ခမရ(၅၀ရ) တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ နှင့် ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ များ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေ
Battles spread to KIA’s 3rd Brigade area
Wednesday, Sept 11, 2013 By KLN
A battle took place between KIA’s 12th Battalion troops and about 50 soldiers from Burmese army’s 507th Light Infantry Battalion (Hka Ma Ya 507) at Lung Byeng, located near Nam Hpang Hka, in southern Kachin State on Sept 10 at 11:30 am. The battle lasted for over six hours and one Burmese army officer was reportedly killed during the fighting. KIA sources say the battle took place as Burmese army invaded KIA’s 12th Battalion territory and launched an attack on KIA frontline post.
A combined force of Burmese army’s 114th and 115th Light Infantry Regiments (Hka La Ya 114 & 115) fired several rounds of artillery shells on KIA’s 34th Battalion position at Loi Hkam Bum in northern Shan State on Sep 9.
On August 9, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
စစ်တွေမြို့နယ် ၊ အုန်းတောကြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဧရိယာဝင်းမှ အရာရှိရုံးထိုင်အဆောင်၊ကင်းစောင့်ရုံ၊ အခြားအဆောင်နှစ်ခု စုစုပေါင်း (၄)ဆောင် မီးလောင်းသွားကြောင်း သိရှိရပြီး အစိုးရမှ သေနပ်ဖောက် လူစုခွဲမှုကြောင်း ဘင်္ဂလီကုလား (၂)ကောင် ပြင်းထန်းစွာ ဒဏ်ရာရှိပြီး အရေးပေါ်ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ထားရကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အခင်းဖြစ်စဉ်မှာ အုန်းတောကြီးကျေးရွာ အနီးရှိ ချောင်းမှ ဘင်္ဂလီ အမျိုးသမီး အလောင်း တစ်လောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေခံရဲစခန်းသို့ ယူဆောင်ကာ စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်ရန်ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါအလောင်းအား ဘင်္ဂလီများ က မိမိတို့ထံ ပေးရန်တောင်းဆိုရာ မရရှိသဖြင့် ချောင်းဝ ရဲစခန်းအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ ညနေထိ အခြေအနေမှာ တင်းမာလျှက်ရှိသည်။ အုန်းတောကြီးဒုက္ခသည်စခန်းသို့ သွားသောလမ်းအားလည်း လုံခြုံရေးများမှ ပိတ်ထားပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနေသည်ဟု ကျန်မာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ RSV အား ပြောပြသွားပါသည်။